Gịnị Bụ Ọkpụkpọ Ọkpụkpụ Black?
A ojii galiki wepụ bụ ụdị galik nke na - esite na gbaa ụka na ịka nkata nke galik ọhụrụ. Ọgwụ galik dị ọcha iji mepụta galik ojii na-ewere ọnọdụ n'ọnọdụ oke iru mmiri ebe enwere oke okpomọkụ sitere na 40 Celsius C ruo 60°C maka ihe dị ka ụbọchị iri.
Site na ọnọdụ ndị a, galik na-adị ngwa ngwa ma na-esikwa na ọcha gaa na agba / agba ojii. Ihe mejupụtara ya bụ ọtụtụ vitamin na mineral ndị dị mkpa dị ka manganese, Vitamin C, Vitamin B6, Selenium, Vitamin B1, phosphorous, ọla kọpa na calcium.
Ahịhịa ojii a na-agbanye n’ọkụ kemgbe ụwa bụ ihe a ma ama na-akwalite ụtọ nri n’otu narị afọ na Thailand, South Korea, yana Japan mana obodo ndị ọzọ dị ka Taiwan, nakweere ya n’oge na-adịbeghị anya, karịchaa n’ụlọ nri dị elu na ebe a na-eri nri. A na-ejikarị ya tinye nri n’ụdị nri dị iche iche, gụnyere ngwakọta anụ na ihe ụtọ, a na-ahụta ya dị ka nri nri ka mma maka akụrụngwa antioxidant ya.
Na mgbakwunye na imezi uto nri, uru ndị ọzọ a na-enweta na galiki ojii gụnyere nkwado belata, imezi ahụike anụ ahụ na usoro ahụ siri ike karị. You nwere ike ịzụta oji oji nke gbara ọcha n'ụdị nke galiki ojii wepụtara ntụ ntụ, galiki ojii wepụ bọọlụ ma ọ bụ ihe ọ garlicụ garlicụ oji ojii.
Black Garlic Wepụ usoro nke Action
Black garlic extract nwere mmetụta mgbochi mkpali nke ọ na - enweta site n’ibelata MBA na pro-inflammatory cytokine na-emepụta LPS na-ebute mkpụrụ ndụ RAW264.7. Mkpokọta hexane nke galik na-ebuwanye ibu na okwu ICAM-1 na VCAM-1 na TNF-α-arụ ọrụ endometrial stromal sel gị.
Ọ na-egbochi ọzọ, leukotrienes, cytokines pro-inflammatory yana ọrụ nke COX-2 na 5-lipooxygenase n'ime sel LPS na-ebute RAW264.7. N'ihi ya, otu onye mbufụt na-adịwanye njọ ma ọ bụ gbochie ya ime.
N'ihe banyere ọrụ oxidative, galiki ojii nwere phenols na flavonoids, ha abụọ na-arụ ọrụ dị mkpa na Nrf2 wayị activation. Ngwakọta dị iche iche nke galiki na-eweta na-abawanye ọkwa ngosipụta nke mRNA na enzymes antioxidant dị ka HO-1, NQO1, na GSTs. Ihe ndi a, nke gunyere ntupo tetrahydro-β-carboline. N-fructosyl glutamate, N-fructosyl arginine allixin na selenium, mezuo nke a site na Nrf2 activation.
Dị ka anyị kwuru na mbụ, a na-esi nweta galik ojii site na galik ọhụrụ site na ị theụ ya nke ọma na gburugburu. Gburugburu ebe obibi kwesịrị ịdị oke iru mmiri (yana iru mmiri 80 ruo 90%) yana ọkụ dị ka 40 °C ka 60 °C. N'ime usoro a, ngwakọta dị iche iche na-etolite n'ihi mmeghachi omume Maillard.
Ka oge na-aga, galik na-acha ọcha mgbe ọ bụla na-eji ọchịchịrị agba. Ha na-etolitekwa ihe na-atọ ụtọ, syrupy, uto balsamic, udiri ahịhịa na-esi ísì ụtọ pụrụ iche.
Ogologo oge usoro ọgwụgwọ dị iche site na otu onye na-emepụta ihe na onye ọzọ mana ọ na-abụkarị ụbọchị anọ ruo ụbọchị iri anọ. Nke a dabere n'ọdịbendị ọdịnala na nke ndị nrụpụta yana ebumnuche ebumnuche nke mpekere ojii.
Agbanyeghị, dị ka nchọpụta nke otu ọmụmụ si dị, ụbọchị 21 dị mma mgbe a na-eme galik ahụ n'imi ala 90% na ọnọdụ okpomọkụ nke 70 60 °C. Dika ihe omumu a si di, onodu ogugu ya na oge o gha eme ka o bulie ikike nke antioxidant nke ihe si na ya puta, yabụ bulite uru oji kari.
Black Garlic Wepụta Uru Ahụike
Enwere ọtụtụ tosh ojii juputara uru ahụike, Gụnyere:
1. Black Garlic Extract Na-enyere Nta ibu
Ihe nchoputa nke otu omumu gosiri na oji oji nwere ike ibelata oke aru, nke abụba abụba na abụba afọ. Nke a bụ ngosipụta siri ike nke galiki ojii arọ ọnwụ uru n’etiti ụmụ mmadụ.
Ihe omumu a gosiputara site na ihe omumu emere na nso nso a nke gosiputara na ijunye galiki oji nwere ike iwusi ike kalori aru gi. Nke a nwere ike inyere gị aka iwepu ogo ngwa ngwa maka ahụike ka mma na physic.
Yabụ, ọ bụrụ na ị buru oke ibu ma ọ bụ na ị chọrọ ka ị felata, tụlee ịbanye n'ime ike galiki dị ka ibu.
2. Ogwu ojii na-erite uru n’ahụ
Black uru bara uru maka anụ bụ n'ihi nnweta nke S-allylcysteine ​​na galik. Ngwakọta ahụ na-eme ka galik ahụ gbasaa n'ụzọ dị mfe iji nye anụ ahụ gị yana akụkụ ahụ gị ndị ọzọ ka ọ ghara igbochi ọrịa.
Otu n'ime uru galiki ojii maka anụ ahụ bụ igbochi ọnya na ikpochapu ihe. Oria akpukpo aru bu oria nke anria ahu aru iberibe pịmpụl na anụ gị. Pgwọ ahụ na - eme n'ihi mgbakasị ahụ na mbufụt nke isi ntutu gị.
N'ihi ihe ndị na-egbu nje ya, maka allicin, galiki ojii na-egbu nje ndị na-akpata nje. Ọzọkwa, mmetụta ọ na-egbochi mbuze na-enyere aka belata ọzịza na ọnya metụtara ọnya.
3. Black Garlic Extract Na-enyere aka na mmezi nke cholesterol
Nnyocha dịgasị iche iche nke sayensị na-egosi na garlic ojii na-enyere aka melite cholesterol na ndị mmadụ na-agbasi ike cholesterol dị elu. Ọ na - eme ka lipoproteins dị elu nke ukwuu (HDL), cholesterol dị mma n'ime mmadụ. Ọmụmụ ihe ndị ọzọ na-atụ aro na ọ na-agbadata ọkwa nke cholesterol ọjọọ na triglycerides dị elu.
4.Black Garlic Extract Na-enyere aka na nkwalite ọbara mgbali elu
Black garlic jupụtara na organosulfur ogige, galiki ojii na-enyekwara arịa ọbara iji zuru ike. Oge izu ike a na-eduga n'ịbelata ọbara mgbali elu ebe ọ bụ na ọbara nwere ebe ọ ga-aga nke ọma karịa.
N'ime ọmụmụ metụtara ndị ọrịa 79 nwere ọbara mgbali elu, ndị ọrụ nchọpụta chọpụtara na nkezi mbelata ọbara mgbali ọbara nke 11.8 mm n'etiti ndị ọrịa na-ewere mbadamba galiki. A na-etinye ndị ọrịa ndị a na ọgwụgwọ ọgwụgwọ izu iri na abụọ ebe ha na-ewere mbadamba ọkpọ abụọ ma ọ bụ anọ kwa ụbọchị n'oge ahụ.
5. Enyemaka Ahụhụ
Ebuba na antioxidants, galiki ojii nwere ike inye nnukwu enyemaka mgbu. Nke a sitere n'eziokwu na antioxidant na-achịkwa akara nke mkpụrụ ndụ, si otú a na-enye aka belata mbufụt. Na mgbakwunye, antioxidants na-ewepụ ihe ndị na-emerụ ahụ na-adịghị mma nke dị ugbu a n'ime ahụ gị iji chebe mkpụrụ ndụ ahụ gị pụọ na nrụgide oxidative nke na-emebi ha, na-akpata mbufụt.
6. Ntutu isi
Kemgbe ahụ, ndị mmadụ amawo uru dị na ntutu ojii maka ntutu oge ochie. Taa, mmanụ garlic garlic dị n'ọtụtụ ụlọ ahịa ịchọ mma iji nye ndị chọrọ ịnọgide na-enwe ntutu dị mma nwere uru isi ojii maka ntutu. Mmanụ a na-akwado uto nke ntutu ọhụrụ, na-akwụsị ịda ntutu ma belata ntutu isi mgbe etinyere ya mgbe niile.
Oji galik na-erite uru n’isi ntutu site n’ezi na galik ahụ Ngwongwo mgbochi nke microbial, yabụ ike nke ịlụ ọgụ megide nje, nje, ero, yana nje ndị ọzọ. Yabụ, ọ bụrụ na itinye mmanụ oria ojii na ntutu gị, ọ nwere ike igbochi oke ndu a nwere ike isi melite. N'ihi ya, isi ntutu gị na ntutu gị na-aka mma.
Ọzọkwa, ojii galik uru maka ntutu isi na-ekewet na mgbochi mkpali mmetụta nke garlic. Ntinye nke ntutu ntutu isi ojii na isi gị nwere ike iwelata mbufụt na iwe na-eso ma na-eme ka ntutu isi na-agbalite n'ọnọdụ ụfọdụ.
7. Nchịkwa ojii Mpụ na-enye aka na mgbochi Ọrịa Cancer
Dabere na nchọpụta ndị Japan mere na 2007, iji galik ojii nwere ike belata akpụ ụmụ oke. Ndị ọrụ nyocha chere na nke a nwekwara ike ime mmadụ. Ọnọdụ a kwekọrịtara na nyocha nke International Journal of Preventive Medicine. Nyocha a na-egosi na ị garlicụ galik ịka nká na-emetụta mmekọrịta kansa.
Ọzọkwa, a vitro ọmụmụ ekenịmde ke 2014 tụrụ aro na fermented ojii garlic wepụ nwere ike belata colon cancer eto eto na mkpochapụ mkpụrụ ndụ cancer.
8. Black Mweputa Ọpụpụ na -emepụta Ahụike Obi Ka Mma
Obi ike mmelite dị n'etiti ndị amaara ama galik wepụ uru. N'ime ụdị anụmanụ anụmanụ 2018 na-atụle galik ojii wepụ uru na nsonazụ nke galik dị ọcha na ahụike obi maka mmadụ na-agbake, ndị ọrụ nyocha ahụ chọpụtara na ụdị galik abụọ ahụ bara uru n'ibelata mbibi obi.
E wezụga nke a, n'ihi ike usoro nchịkwa cholesterol ya, galiki ojii nwere mkpụrụ ego nwekwara ike belata ọrịa ọrịa obi.
9. Black Garlic Extract Na-enyere aka na nkwalite ahụike
Na mgbakwunye, galiki ojii nwekwara ike ịkwalite ncheta gị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-alụso ọnọdụ ọgụgụ isi ọgụ dịka ọrịa Parkinson, ọrịa Alzheimer ma ọ bụ ọbụna dementia. Ihe antioxidants ndị dị na ya nwere ike belata mbufụt nke metụtara ma ọ bụ jikọtara ya na ọnọdụ ahụ. N'ihi nke a, ahụike ụbụrụ gị na-adịwanye mma, na-enwe ikike ncheta ka mma.
Osisi ndị ọzọ na-ewepụta uru ahụike
Ebe ọ bụ na ụmụ irighiri oji ojii na-eme ka usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ dị, ha nwekwara ike dị irè maka:
Mgbochi Ọrịa shuga na enyemaka
Mgbochi Ọrịa cancer na enyemaka
Jụọ ọgwụ itch
ọnya na-akpata ọnya nri
igbochi kansa nkuchi na enyemaka
mgbochi mgbochi oyi na enyemaka nkịtị
ikpu yist na-efe efe
Ọdịiche dị n'etiti Garlic na Garlic Na-acha Ọcha
N'ihi mmeghachi omume nke Maillard na galik ọhụrụ na-aga ka ọ ghọọ galik ojii, ọ bụghị ihe ijuanya na ụdị galik abụọ a dị iche, ọ bụghị naanị nke nwere agba agba, kamakwa na njikwa kemikal na ụtọ ha.
Ihe na - enye aka na - agbanwe udiri ihe kacha mma site na mbelata fructans (fructose na glucose) na galiki n'oge a na - ahazi ya. Na ngwụcha, galik azụ na-enwe ntakịrị fructic karịa galik na-enweghị ya. N'iburu n'uche na fructans bu isi ihe na - eme nri, obere ego ha di, ya mere, putara na galiki oji adighi adi uto karia nke ohuru.
Ọchị nke ụtọ ojii adịghị esi ike ka nke galiki ọhụrụ; onye nke gara aga dị ụtọ karịa, sịga na balsamic. N'aka nke ozo, ihe nke ikpe azu siri ike ma karie ya iwe. Nke a bụ n'ihi na galiki ojii nwere obere allicin. N'oge usoro ịka nká, ụfọdụ n'ime allicin na galik ọhụrụ na-agbanwe gaa na antioxidant ogige dịka diallyl sulfide, njemene, mbibi diallyl, diallyl trisulfide yana dithiins.
N'ihi mgbanwe akụrụngwa nke ihe ọkụkụ, galiki ojii nwere ndụ ndụ ya ka ihe atụ, akụrụngwa antioxidant, karịa galiki ọhụrụ. Ngwakọta ndị dị na galiki ojii, dị ka S-allylcysteine ​​(SAC) na-arụ ọrụ karịa ka a na-atụnye ya na galik ọhụrụ.
Dị ka o siri dị, mgbakwunye galiki ojii dị elu na ihe ndị na-enye ehi, kalori, akwara na iron na ígwè ma e jiri ya tụnyere galik raw. N'aka nke ọzọ, galiki nwere vitamin C, carbs na allicin dị elu karịa ụdị galiki a haziri nke ọma.
Iji bụrụ nke ziri ezi, ngaji galik abụọ dị ụrọ nwere ihe dị kalori 25, sodium 3 mg, carbohydrate nke 5.6 g, protein 1 g, 0.1 g abụba, 0.4 g fiber, ihe oriri 5.2 mg vitamin C, calcium 30 mg na 0.3 mg iron. N'ụzọ dị iche, otu ụdị mkpụrụ osisi ojii a na-ewepụta ya nwere calorie 40, carg 4g, protein 1g, abụba 2g, fiber 1g, 160mg sodium, iron 0.64mg, vitamin C nke 2.2mg na protein milligram 20.
Black galiki Wepụta Ọgwụ
Ma ịchọrọ ị ballsụ bọọlụ oyuyo, ihe ọ extractụ garlicụ oji oji, ma ọ bụ nzere oji ojii na bentong ginger, ọ dị mkpa ka ị soro usoro a tụrụ aro ya. Dịka okachasị galik ojii bụ ngwaahịa eke, o nwere ike ibute ụfọdụ nsogbu ma ọ bụrụ na a inụbiga ya oke.
n'ihi na ojii galik wepụ ntụ ntụ iji mee ka mmiri nnụnụ oliv oji ma ọ bụ ihe ọ garlicụ garlicụ oji oji ma ọ bụ tinye nri gị, jiri ihe na-adịghị mma 1/3 tsp nke ntụ ntụ otu ugboro n'ụbọchị. Usoro onunu ogwu a metutakwara mgbe i choro iji galik galik na bentong ginger. Ma ọ bụghị ya, ịnwere ike ịgbaso ọgwụ dọkịta gị.
Chọrọ ịma ole galik ojii riri ụbọchị? Onwere, onweghi ihe sayensi gosiputara etu galik oji riri ubochi. Agbanyeghị, nyocha dị iche iche na nyocha onye ọrụ na-atụ aro nke ahụ 5-10 iberibe (cloves) kwa ụbọchị bụ ihe dị mma ma dị nchebe.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ iwere galik ojii wepụta bọọlụ ma ọ bụ mbadamba, ọgwụ kachasị atụ bụ 200mg. Maka okwu Black Garlic Wepụ Tonic Gold, a na-ewu ewu nwa garlic wepụ ihe ọ juiceụ juiceụ, ọgwụ a tụrụ aro bụ 70ml kwa ụbọchị.
Ogwu ojii Gịpụtara Dị Ize Ndụ?
Black garlic wepụ bụ n'ozuzu dị mma maka oriri mmadụ na ọbụna Nde. Agbanyeghị, dịka mgbakwunye ọnụ, ọ nwere ike na-akpata nhụjuanya nke afọ, ma nke a na-eme n'ọnọdụ ndị na-adịghị adịkarị. Ya mere, ọ bụrụ na ị nwere afọ ma ọ bụ nri nri akụkọ ihe mere eme, ọ dị mkpa ka ị buru ụzọ gakwuru dọkịta gị tupu ịwepụta ya ma ọ bụ mgbakwunye mgbakwunye yiri ndị ọkachamara na-edozi ahụ na GoldBee
Ọzọkwa, nnukwu ọnụọgụ nke mmịpụta ahụ adịghị mma maka ụmụaka, ebe ngwa ahụ nwere ike ibute mbibi anụ ahụ nwatakịrị. Ntinye ngwa di n’isi nwekwara ike ime ka akpukpo aru mee ya mgbe a mere nwanyi di ime.
Ngwa Ọkpụ ojii Ewepụta
1. Nri uto nke nri
Dịka galik raw, a na-eji ntụ ọka ojii emere maka ebumnuche ebe a na-etinye ya n'ọtụtụ savory dị iche iche. Ya gbapu nri uto.
N'ihi ihe ndị e ji egbochi nje ya na mgbochi mkpali, a na-eji mkpopụta ahụ dịka akụrụngwa isi na ngwaahịa ịchọ mma dị iche iche. Ngwa ịchọ mma nke nwere ya dị mma na mgbochi akpịrị ma ọ bụ inwe ahụike ntutu, n'etiti uru ndị ọzọ.
3. Mmeju na-eme ka ahụike dị mma
Obere galik na-eme ka usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ dịkwuo ukwuu. Ya mere, a na-eji ihe eji ewepụta nri emee nri nke na-enyere ndị mmadụ aka ịpụ iche n'ọrịa dị iche iche.
Black Garlic Supplement Supplement
Black garlic wepụ Mmeju na-abata n'ụdị dị iche iche tinyere ntụ ojii ojii, ntụ bekee, bọọlụ ojii wepụtara ma ọ bụ ihe ọ garlicụ juiceụ oji ojii. Otu n'ime mmeju a na-aga aha ya bụ Black Garlic Extract Tonic Gold, nke bụ mmiri mkpụrụ osisi galiki ojii.
Black garlic wepụ bụ ngwaahịa nke raw garlic. Ọ dị n'ụdị ojii galik yọ ntụ, galiki ojii wepụ bọọlụ ma ọ bụ ihe ọ garlicụ garlicụ oji ojii. Offọdụ uru nke mgbakwunye a bụ sistemu sistemụ mgbochi ọwụwa, mgbochi ida ntutu, udiri akpụkpọ ahụ na imeziwanye ụda na oke ibu. A na-eji mmịpụta ahụ eme ihe n'ọtụtụ mpaghara, gụnyere nka nri na ụlọ ọrụ ịchọ mma.
Banerjee S., Mukherjee PK, Maulik S. Garlic dị ka ọgwụ mgbochi: Ihe ọma, ndị ọjọọ na jọrọ njọ. Phytother. Res. 2003; 17: 97–106.
Ha AW, Ying T., Kim WK Mmetụta nke galiki ojii (Allium satvium) extracts na lipid metabolism na oke eri nri nwere oke abụba. Nutr. Res. Na-eme. 2015; 9: 30–36
Kang O.-J. Nyocha nke melanoidins mepụtara site na galiki ojii mgbe usoro nhazi ọkụ dị iche iche. Nke mbụ. Nutr. Sci nri. 2016; 21: 398
Kim DG, Kang MJ, Hong SS, Choi YH, Shin JH Ihe mmetuta antiinflammatory nke ihe na - arụ ọrụ nke dịpụrụ adịpụ na galiki ojii dị agadi. Phytother. Res. 2017; 31: 53–61
Milner J. Encyclopedia nke nri nri. Marcel Dekker; New York, NY, USA: 2005. Galik (Allium sativump. 229–240.
1.What bụ Black Garlic wepụ?
2. Black Garlic Wepụ usoro nke Action
3. Black Galik wepụ Production
4.Black Galiki wepụ Uru Uru Ọrịa
5. Ihe dị iche na etiti ojii na galik ọhụrụ
6. Ihe dị iche na etiti ojii na galik ọhụrụ
7.Black Garlic Wepụ Ọgwụ
8.Oji Galik Wepụ Ọdachi?
9. Black Garlic wepụ Ngwa
10.Black Garlic wepụ Mmeju